Aya ndiwo matsva ehukama hweKeKit | IPhone nhau
Mushure meWWDC 16, akawanda masoftware zvikamu akanganiswa, imwe yacho yanga iri HomeKit, Apple's smart home automation plan, iyo kunyangwe ichizvarwa muna 2014, iri kufambira mberi nekumhanya kwemasvosve. Midziyo uye vanopa sevhisi havasi kujairira kusanganisira kutsigira kweKeKKit, uye kufambira mberi kwavo kuri kumira senge sekunge kusiri kupfuura Apple Pay. Iye zvino tave kuzokuudza kuti ndeapi matsva madhizaina ayo HomeKit ave anoenderana mushure meWWDC 16, ichiwedzera mikana yayo kumberi kana zvichikwanisika, kuyedza kuve imba yekuzvigadzirisa muyero mudzimba dzese.
Nekudaro, Keynote yegore rino yanga iri yekufananidzira kana zvasvika kuKeKKit, asi isu tinodzoka kune zvakafanana, vagadziri vakakosha. Kungofanana nevashandisi vekushandisa ndiyo kiyi yezvinhu zveIOS kuti zviitwe mune imwe sisitimuVagadziri vezvigadzirwa zvemumba vane mumaoko avo kuti vashandise HomeKit kana kwete. Uye chokwadi ndechekuti parizvino ivo vasarudza kushandisa kwavo kunyorera, uye zvinonyadzisa chaiko.
Munguva yeKeoteka isu takakwanisa kuziva kuti ndeapi machira uye mashandiro awo, izvi zvishandiso zvakanyorwa mune inotevera runyorwa yakapihwa nevamwe kubva Applesfera:
Nekudaro, isu tine chikonzero chekufunga kuti kufambira mberi kweKeKKit kuchaenzana kana kutonyanya kupfuura Apple Pay's. Icho chiri kunonoka, uye vashandisi vari kutanga kurasikirwa nefariro mune aya marudzi emidziyo, ayo isu tese tinoziva kuti aripo, asi haatombosvika. Chii chimwe, kupatsanurwa kuri kuwedzera, vagadziri vanosarudza kugadzira avo ekushandisa ekushandisa avo zvishandiso
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Aya ndiwo maitiro matsva eKeKKit
Alberto Rico akadaro
Pangangotanga HomeKit kubatanidzwa neiyo KNX protocol… Zvese zvichave zviri nyore, chinonyanya kufadza ndechekuti nzira dzekutaurirana dzakavhurika uye dzakajairika. Iwo maprotocol akaenzana zvakanyanya panguva ino yekumba, tertiary uye kunyange maindasitiri otomatiki ndeyeKNX, Bacnet uye modbus. Isu tichanyatsoona matauriro anoita HomeKit mamwe emaprotocol aya munguva pfupi (ndinovimba). Kwazisai vese.
Pindura Alberto Rico
NEO Turf Masters, yechinyakare yeNOGOO pane yako iPhone kana iPad